Trusty Shops|Eaoron Clear Acne Cream
Product Code: oz0373
အသုံးပြုပုံ - သန့်ရှင်းတဲ့ အရေပြားပေါ်သို့ ဝက်ခြံဖြစ်တဲ့ နေရာတွင် ပမာဏ အသင့်သင့်ယူပြီး (တို့) လိမ်းပေးပါ၊ ( မျက်နှာတစ်ပြင်လုံး မလိမ်းရ- ဝက်ခြံဖြစ်တဲ့နေရာသာ လိမ့်ရန်)။ ဝက်ခြံ နည်းနည်း ပြင်းနေတယ်ဆိုရင် ဂွမ်းလေးနှင့် တို့ပြီး (၄-၆)နာရီတိုင်း လိမ်းပေးပါ။ ဂွမ်း အသစ်ကို ပြန်လည်းအသုံးပြုပါ။
You're reviewing: Eaoron Clear Acne Cream
Chanel Makeup Base 10 Ros ...
Chanel Makeup Base 10 Rosee
CHANEL renews its must-have makeup base with an enhanced formula, higher UV protection and new on-the-go packaging. Immediately, skin undertone is corrected. Light is perfectly reflected on the skin surface with improved radiance that lasts up to 8 hours.
Natio Rose Water Hydratio ...
Natio Rose Water Hydration
အသားအရာင်မညီသူများ၊ အသားဖြူလိုသူများ၊ ခြောက်သွေ့သော အသားအရေများအတွက် အထူးသင့်တော်ပါတယ်။
Purasoft Collagen Moistur ...
BB Blur Skin Perfector ဟာမျက်နှာကို ဝင်းပစေပြီး၊ မျက်နှာပေါ်ရှိ အမဲစက်များကို ဖြတ်ပေးသည်။ မျက်နှာပေါ်ရှိ အရေအကြောင်းများ၊ချွေးပေါက်များ၊ အသားမညီသောသူများအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။
Eaoron Crystal White Brig ...
Tea Tree Face Cream ဟာအရေပြားကို အစိုဓာတ်ဖြည့်ပေးပြီး ချွေးပေါက်ပိတ်ခြင်းမှ လည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အသားအရောင် ညီအောင်ထိန်းပေးပြီး၊ အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်းမှလည်း ထိန်းပေးပါသည်။
Restoria Colour Restoring ...
Healthy Care Lanolin Crea ...
Healthy Care Lanolin Cream - (၃)မ်ိဳး
Choose100g (Grape Seed Oil)100g(Evening Primorse Oil)100g(With Vitamin E)
Aesop Camellia Nut Facial ...
Aesop လက်ဖက်ပန်းပွင့်တို့၏ အရွက်တို့နှင့်ပြုလုပ်ထားသော cream
Eaoron Black Caviar Cream ...
Eaoron Black Caviar Cream - ငါးဥ
အမည်းစက်ပြသနာများ၊ အသားအရေအရောင်ဖြစ်ပေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းပေးပြီး ချွေးပေါက်ကျဉ်းစေကာ စိုပြေတောက်ပ နုပျိုမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
Cetaphil SPF 50+ - For al ...
Cetaphil SPF 50+ - For all Skin Types
(SPF50+)နေလောင်ဒဏ်မှန်သမျှမှကာကွယ်ပေးဖို့နှင့် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး စိုပြေလှပစေဖို့ Moisturiser